Admin – Page2– Lamin May
“ဆရာႀကီး ဦးျမင့္သိန္း(လႈိင္သာယာ)ေပးတဲ့ ေဆး ေလမျဖတ္ခ်င္ရင္ ေန႔တိုင္းစားေပးပါ”
ဒီနည်းကို ပေးခဲ့သူက တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီး ဦးမြင့်သိန်း(လှိုင်သာယာ)ဖြစ်ပါတယ်။ လေကအောက်ကိုဆင်းရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေပါတယ်။ အထက်ကိုလေပူဆန် လာရင်မကောင်းပါဘူး။ လေလည်ပြီးအောက်ကို ဆင်းစေဖို့”နရသုခ”ဆေးကျမ်းမှာပါတဲ့နည်းကို ပေးပါ့မယ်။ ပဲကြီးလှော်(၁၀)စေ့ကို အခွံခွာပြီး ကြက်သွန်ဖြူ(၁)မွှာနဲ့ နေ့စဉ်စားပေးရင် လေပူလည်း အထက်ကိုမဆန်ဘူး။လေကအောက်ကို ဆင်းပါတယ်။ လေအသွားအလာမှန်တဲ့အတွက် လေဖြန်းမှာ လေဖြတ်မှာမစိုးရိမ်ရပါဘူး။နေ့စဉ် စားပေးရပါမယ် Zawgyi ျဖင့္ […]
“အဆိပ် အားလုံးရဲ့ဖြေဆေး ဟင်းငုတ်ပင်(ခေါ်)သခွပ်ပင် ရဲ့ ဆေးအသုံး”
မြွေဆိပ်နိုင်တဲ့ ဟင်းငုတ်ပင်(ခ)သခွပ်ပွင့်ယောအခေါ် ဟင်းခတ်ပွင့် ဟင်းငုတ်ပင် (ခ)သခွပ်ပင်ကိုဒေသအလိုက် ဟင်းဂုတ်ပင် ဟင်းခတ်ပင်ဟု ခေါ်ကြသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးပေါက်သည်။ နှစ်ရှည်ပင်ကြီး။ ပင်စည်တွင် အခေါက် အပွေးမရှိ။ အရွက်အနည်းငယ်ဝိုင်း။ အပွင့်အဖြူရောင်။ပဒိုင်းပွင့်နှင့်တူသည်။တန်ခူးမှဝါဆိုလအထိပွင့်သည်။အသီးမှာသေးသေးရှည်ရှည်။နှစ်ပေခန့်ရှိ။ အခေါက် ဆေးဘက်ဝင်ဝင်ပုံ – ၁။ မြွေပွေး။မြွေဟောက်ကိုက်ခံရပါကအခေါက်ကိုအမြန်ဝါးစားလိုက်ပါလျှင် အဆိပ်မရှိတော့ပါ။ ငန်းတော်ကျား။ငန်း မြွေ အပါအဝင်ပါ။(မြွေပွေးနှင်မြွေဟောက်သာအကိုက်ခံသူရှိ၍ဦးစားပေးဖေါ်ပြရခြင်းပါ) ၂။ […]
“၁၀ ရက်ပဲကြိုသောက်လိုက်တာ ဆီးကျောက် လုံးဝပျောက်သွားတယ်”
20.7.2017 နေတွင် အရွက် ကိုပြ၍ ကျတော် အပင် အမျိုးစားသိခြင်းကြောင်းတင်ခဲ့ပါတယ်၊ ယင်း အရွက် ကို ပါးပါးလှီးပြီး ငါးကြင်း ဖန်ခွက် တွင်ထည့်ရေထည်ကာ တစ်ည ထားပြီးနံနက်တွင်သောက်ရပါသည်။ စသောက်သည်နေ့တွင် နေလည်းပိုင်းမှစပြီး ဝမ်းဗိုက်လှုပ်ရှားလာသည် အိမ်သာ တက်ခြင်းသလိုလို လေလည်ခြင်းသလိုလိုမျိုးပါ ။ဆီးသွားနှုံး နဲနဲများလာပါသည်။ နောက်တရက်တွင် […]
“ရှေးလူကြီးတွေ ပြော ခဲ့ တဲ့ အတိတ်တဘော င်တွေ အခုခေတ် မှာ ကွက်တိမှန်နေပြီ”
ရှေး လူကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့ အတိတ်တဘောင်တွေ မှန်ပုံကတော့ ဒီနေ့ခေတ်ကို ဘေးကနေ ထိုင်ကြည့်ပြီး ပြောနေသလား မှတ်ရတယ်ဗျာ။ ကွက်တိကို မှန်နေတော့တာပဲ။ အဲဒါကြောင့် “အတိတ်တဘောင်ဆိုတာ နိမိတ်ဆောင်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားပုံ ပေါ်လာတာ ဖြစ်ရမယ်ဗျ။ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အမြင်စူးရှပုံကတော့ ချီးကျူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့ […]
“ေခ်ာင္းေျခာက္ ေတြဆိုးၿပီး အနံ့ ေပ်ာက္လာျပီး မသက္သာလ်ွင္ မုခ် ေပ်ာက္ေစမည့္ ေဆးနည္း”
ချောင်းခြောက် တွေဆိုးပြီး အနံ ပျောက်လာလျှင် ရန်ကုန်က သမီးတစ်ဦးမေးလို့ပါ။ လည်ချောင်းက ငါးရက်လောက်ရှိပီနာတာ ကြားထဲမှာ တရက်ဖျားတယ် ချောင်းခြောက် နည်းနည်းဆိုးတယ် အခု မနေ့ကထဲက အနံ့က ရတာရ မရတာတွေလဲမရဖြစ်နေလို့ပါ။ ကြက်သွန်နီတွေ လဲဝါးစား ပရုတ်ဆီ နဲ့ရေနွေးငွေ့လဲရှုတယ်မထူးလို့ပါ။ အနံ့ပြန်ရနိုင်မယ့် ဆေးနည်းလေးရှိရင်ပေးပါနော် လောဆယ်တော့ အွန်လိုင်းကနည်းတွေလဲစုံနေပါပီ […]
“ဆီး ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္အတြက္ အရိပ္မထြက္ပင္ (သို႔) ေက်ာက္ကပ္ပင္ ရွားပါး ေဆးနည္း”
မြေမှာကပ်ပေါက်၍ အရွက်ဖါးဖါး လိပ်ပြာတောင်ပံကဲ့သို့ အပင်ခြေတွင် ဥများ ကပ်လျှက် ရှိပါသည် ။ တောတောင်ထဲတွင် မိုးတွင်းရောက်မှသာ အပင်အစို့ ကလေးများ စတင်ထွက်တတ်ပြီး ၎င်းပေါက်သော နေရာမှလွှဲ၍ အခြားနေရာတွင် မပေါက်ပါ ။မိုးတွင်းရောက်ပါက ၎င်းအပင်တွေ့ရှိသောနေရာတွင် ရှာပါက ပြန်လည်ပေါက်ရောက်နေသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည် ။ မြေမှာကပ်ပေါက်သောကြောင့် အရိပ်မထွက်ပင်ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ပါသည် […]
ယခုဖေါ်ပြမည့်ဆေးသည် ကိုယ်ဖေါကိုယ်ယောင်ရောဂါအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော ဆေးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောယောင်ရောဂါဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တွင် ရေဓါတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ လေဓါတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ တစ်ကိုယ်လုံးယောင်နေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဥပမာ…ကျောက်ကပ်မကောင်းလို့ ဖောယောင်နေတာ (သို့)လေဖြန်းပြီးဖေါယောင်တာ အသည်းအလုပ်လုပ်မှုအားနည်းလို့ဖေါယောင်တာ ခန္ဓကိုယ်ရေဓါတ်စွန့်ထုတ်မှုနည်းလို့ ဖေါယောင်တာတစ်နည်းပြောရရင် အာပေါဆယ့်နှစ်ပါးတွင် ယိုစီးအာပေါခေါ်တဲ့ ချွေး။ ဆီး ။ ဝမ်း ။ ဆိုတဲ့သုံးပါးပျက်နေလျှင် ခန္ဓာကိုယ်ဖေါယောင်တတ်ပါတယ်။ မည်သို့သောဖေါယောင်မှုဖြစ်ပါစေ- […]
ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းတဲ့ အထူး ေဆးနည္း
နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းပြီး အသက်ရှူုမဝ၍ ဆရာဝန်နှင့်ပြ၊ဆေးများသောက်သော်လည်း သက်သာလှသည် မဟုတ်ပါ။ နုလုံး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့်ပြကြည့်ရာ ခွဲစိတ်ဖို့အကြံပေးပြီး ရက်ချိန်းပေးထားသည် ဆိုပါသည်။ ထိုသူငယ်ချင်း ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှဆေးနည်းကောင်းလေးတစ်ခုရ၍ ခွဲစိတ်ချင်သောစိတ်ဆန္ဒလည်းမရှိသောကြောင့်ထိုဆေးနည်းလေးအားအားကိုးအားထား ကာ ဆေးညွှန်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သူငယ်ချင်းအားလည်းမခွဲစိတ်စေချင်ပါအကြောင်းကားခွဲစိတ်မည်ဆိုပါကသိန်း(၁၀)အထက်သာကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်၏လစာအခြေအနေနှင့် လုံးဝမလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။ သူငယ်ချင်းဆုတောင်းပြည့်ပါသည်။ခွဲစိတ်စရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ သိသိသာသာသက်သာသွား၍ဖြစ် လေသည်။ ထိုဆေးနည်းမှာ….(၁)ချင်းစိမ်းသတ္တုရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်၊ (၂)ကြက်သွန်ဖြူသတ္တုရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်၊ […]
“ဒူးနာသူတိုင်းကို ကိုယချင်းစာလို့ ကိုယ်တွေ့ပျောက်တဲ့နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်”
ဒူးနာဖူးသူမှသိလို့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ဆေးနည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီနည်းလမ်းကစာရေးဆရာမ လှိုင်း(တောင်ကြီး)ရဲ့ လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။ ဒူးနာပျောက်တဲ့ဆေးနည်းပြောပြမယ် နော် လက်တွေ့သက်သာခဲ့တာမို့ ဒူးနာနေတ ဲ့မိတ်ဆွေတွေလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် …ကျမညာဖက်ဒူးကတစ်စစ်စစ်နဲ့ ကိုက်ကိုက်ပြီးနာနေတာ တော်တော်ကြာပေါ့ နာလာရင်အော်နေရတယ်…. ဆေးမျိုးစုံလိမ်းကြည့်တာ ပူပြီးနံတယ် …ခဏသက်သာတယ်ပြန်ဖြစ်ရော … ဒါနဲ့ ခြေဖနောင့်နာတုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့ ဆေးနည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်တာ […]
“ငါးမျက်စိလို့ အခေါ်များတဲ့မျက်လုံးအောက်က အဖုလေးတွေကို ပျောက်ကင်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း”
ဒီအဖြူဖုလေးတွေဟာ အများအားဖြင့် မျက်လုံးအောက် အနီးတဝိုက်မှာ ဖစ်လေ့ရှိပြီး နဖူး၊ မျက်ခွံ ၊ ပါး နှင့် ရင် ဘတ် တွေမှာလည်း ပါက်လေ့ရှိပါတယ် ။ အဓိကအားဖြင့် ထိခိုက်လွယ်ပြီး အရေပြားပါးလွှာတဲ့ နရာမျိုးမှာ ဖစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းကတော့ မိမိမျက်နှာ အသားအရေအတွက် […]